Zvirongwa zvepamhepo kana masevhisi Ndeipi yakanakisa sarudzo? | Linux Addicts
Diego ChiGerman Gonzalez | 31/10/2021 07:24 | General, Zvirongwa
Kubva pakuonekwa kwaKurume 2006 kweGoogle Docs (Yave kunzi Nzvimbo dzekushanda), kunaka kwemasevhisi epamhepo kwaive kuita nani zvinoshamisa. Kusvika pamwero wekuti mubvunzo uri mumusoro, uyo makore apfuura ungadai wakaonekwa seupenzi, nhasi unoruramisa chinyorwa ichi.
Kunyange zvazvo ichokwadi kuti michina yakaita seChromebook ikozvino inotsigira kushandiswa kwekushandiswa kweLinux (Uye yeWindows inoshandisa Waini), chokwadi ndechokuti vanogadzira mapurogiramu akadai seAdobe vave vachironga kufambisa zvose kana chikamu chezvigadzirwa zvavo kwenguva yakareba. kugore.
1 Mapurogiramu epamhepo kana masevhisi. Pane imwe sarudzo iri nani here?
1.1 Zvakanakira uye kuipa kwezvirongwa
1.2 Zvakanakira uye zvakaipira zvepa online masevhisi
2 Tinogara neiko?
Mapurogiramu epamhepo kana masevhisi. Pane imwe sarudzo iri nani here?
Iko hakuna nzira yakachengeteka yekuzviita benzi pane kuisa pangozi fungidziro yetekinoroji, zvisinei, nekunonoka kunokonzerwa nedenda, shanduko kuenda kumasevhisi epamhepo inoita seisingamisiki. Chokwadi, sarudzo imwe neimwe ine zvayakanakira nezvayakaipira.
Pane imwe nguva iyo misiyano inove isina kujeka saka ndiri kuenda kumisikidza muganho unopokana. Nezvinangwa zvechinyorwa chino, isu tinofunga software iyo yakaiswa munharaunda uye inogona chete kugovera ruzivo kuburikidza nekushandisa chekunze chishandiso.
Nezvekuzviitira wega pamhepo masevhisi (Nextcloud, OnlyOffice, Collabora Hofisi), sezvo isu tichifanirawo kutarisira kuisirwa nekugadzirisa kwavo, tinovaisawo sezvirongwa.
Zvakanakira uye kuipa kwezvirongwa
Mukana wakajeka wekushandisa chirongwa chakaiswa munharaunda ndeyekuvanzika. Kunze kwekurwiswa kwecyber kwakanangana nekombuta yaunoshanda nayo, hapana anogona kuwana zvaunoita nayo. Iwe zvakare haudi internet yekubatanidza uye, pachine kazhinji musiyano wakakosha nemabhenefiti. Uye, chokwadika, hausi kuratidzirwa kuzvisarudzo zvevamwe vanhu zvinokutapura.
Chinhu chikuru chakashata chezvirongwa zvakaiswa munharaunda ndezvekuti wakasungirirwa pakombuta yaunoshandisa saka uri panjodzi yehardware kana matambudziko esoftware (kusaenderana nemamwe mapurogiramu, akakundikana zvigadziriso, nezvimwewo)
Zvakanakira uye zvakaipira zvepa online masevhisi
Nyanzvi dzekuita zvechivanhu dzinoti munhu anofanirwa kutarisa nezvezvikamu makumi maviri kubva muzana zvezviitwa zvinoburitsa makumi masere muzana emhedzisiro. Mupfungwa iyoyo, masevhisi epamhepo anotiponesa kubva pakubata nekudhawunirodha, kugadzirisa, kuchengetedza uye kugadzira makopi ekuchengetedza ebasa redu.
Chakanakira chechipiri ndechekuti masevhisi epamhepo haana kusungirirwa kune mudziyo. Kutaura zvazviri, dzakagadzirirwa kuti dzienderane nezvauri kushandisa. Mumwe anogona kutanga mameseji pafoni, agadzirise pahwendefa uye owedzera mifananidzo kwairi uye oidhinda padesktop komputa.
Muzviitiko zvakawanda, masevhisi aya akagadzirirwa chinangwa chaicho sekugadzira zvirimo zvesocial network, saka vane akafanotsanangurwa matemplate uye mafomati. Izvi zvinotiponesa pakuda kuziva zvinodiwa kuti basa redu rienderane.
Hatingave malinux akakodzera zita kana tisina kuisa se Chekutanga kusavimbika kwemasevhisi epamhepo ndechekuti isu tiri kushandisa proprietary software. Kana kuti kwete, hatizivi. Ndiyo mushandisi webasa anozvisarudzira. Muzviitiko zvakawanda, kunyangwe tikabvumidzwa kuchengetedza mhedzisiro munharaunda, Hatizokwanisi kuchengetedza zvikamu zvechikamu kana kuwedzera zvemukati mazviri kubva kune mamwe masosi.
Imwe pfungwa yakakosha ndeyekuvanzika. Hafu achiseka, hafu zvakakomba, mutsoropodzi wepamhepo masevhisi akakurudzira kusanyora zvirongwa zvekuponda mutungamiri weUnited States muMicrosoft 365 (Microsoft Office version yeGoogle Docs). Mupi webasa anogona kuwana basa redu, uye zvichienderana nemamiriro ekushandiswa, anogona kurigovera zvakare.
Uyewo hatifaniri kukanganwa kuti kunyange zvazvo akawanda emasevhisi aya anosanganisira zvirongwa zvemahara, mabhenefiti akazara anosanganisirwa mushanduro yakabhadharwa. Uye, chokwadi, tinofanira kuva neInternet akavimbika
Senguva dzose, mhinduro inobva pane chero chaunoda kana chaunoda, Kana iwe ukaisa pamberi kunyaradza uye kuchengetedza nguva pamusoro pekuvanzika uye kuita zvakasiyana-siyana, online masevhisi pasina mubvunzo ndiyo yakanyanya kunaka sarudzo. Zvimwe chete kana ukashanda pamwe chete nevamwe vanhu.
Kana iwe uchida kutonga kwakawanda pane zvaunogona kuita uye ndiani anogona kuwana zvaunoita, pasina kupokana munharaunda yakaiswa software ndiyo yakanyanya kunaka.
Mune zvinyorwa zvinotevera ini ndichaenzanisa sarudzo dzakasiyana dzemapurogiramu akaiswa munharaunda uye masevhisi epamhepo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Zvirongwa zvepamhepo kana masevhisi Ndeipi yakanakisa sarudzo?